I-Premenstrual Syndrome (PMS)
Yintoni i-Premenstrual Syndrome (PMS)?
I-Premenstrual syndrome (i-PMS) yingqokelela yeempawu abantu basetyhini abaninzi abanazo kwisithuba seeveki enye okanye ezimbini ngaphambi kokuba uye exesheni. Ezi mpawu zinokuba ngokwasemzimbeni, ngokwasengqondweni nangokweemvakalelo. Bayanyamalala kwakamsinya emva kokuqala kwegazi lokuya exesheni.
Abaphandi abaqinisekanga ukuba yintoni ebangela iPMS. Inkcazo eyaziwayo kukuba iimpawu ze-PMS zihambelana nokutshintsha kwe-cyclic kwi:
Iihomoni zesini sabasetyhini
Ezinye iikhemikhali zobuchopho (ii-neurotransmitters)
Kukho ubungqina bokuba nemagniziyam ukusilela kungadlala indima.
I-docusate sodium 100 mg
Indlela yokuphila inokudlala indima ebalulekileyo kwi-PMS. Iimpawu ze-PMS zibonakala ngathi ziyabakhathaza abafazi:
Khokelela kubomi obunoxinzelelo
Yiba nokutya okuphezulu kwi:
Nangona kunjalo, akucaci nokuba ezi zinto ziwonyusa na umngcipheko we-PMS okanye ukuba ngaba ii-PMS zineengxelo ngokwahluka kwendlela yokuphila. Umzekelo, kunokwenzeka ukuba i-PMS ibangele uxinzelelo kunokuba uxinzelelo lubange i-PMS.
Amayeza anokuzibaxa iimpawu zePMS. Izinto zokucwangcisa ngomlomo zibangela iimpawu ze-PMS kwamanye amabhinqa. Nangona kunjalo, kwabanye abantu basetyhini, iimpawu ziyaphucuka okanye ziyanyamalala ngelixa kusetyenziswa iipilisi zolawulo lokuzalwa.
Kukho impikiswano kwindawo yezonyango malunga numahluko phakathi kokungakhululeki kwangaphambi kokuya exesheni kunye ne-PMS yokwenyani. Ukuphazamiseka kwangaphambi kokuya exesheni kuqhelekile phakathi kwabasetyhini abakwiminyaka yokuzala. Ichaphazela malunga nekota yesithathu yabo bonke abafazi abasexesheni.
Nangona kunjalo, bambalwa kunabafazi abalishumi abaneempawu ezinzima ngokwaneleyo ukuba zingaphazamisa ubudlelwane babo okanye ziphazamise umsebenzi wabo kunye noxanduva lwasekhaya. Abanye oogqirha bavakalelwa kukuba kuphela ngamabhinqa aneempawu eziqatha ngolo hlobo anePMS yokwenene.
Abanye oogqirha basebenzisa ingcaciso engqongqo kangako yePMS. Inkcazo yabo ibandakanya iimpawu eziphakathi ukuya kweziphakathi.
Isifo se-premenstrual dysphoric disorder (PMDD) sisimo esibi se-PMS. Abasetyhini abanale ngxaki baneempawu ezi-5 okanye nangaphezulu ze-PMS, kwaye banamava okutshintsha kwemvakalelo, umsindo, ukuba nochuku, uxinzelelo kunye / okanye uxinzelelo.
Iimpawu ze-PMS ziwela kwiindidi ezimbini ngokubanzi:
Ukudumba kweenyawo kunye namaqatha
Ukugcinwa kwamanzi kunye nokuzuza ubunzima
Iintlungu zesibeleko esibuhlungu ngaphambi nje kunye nasebudeni beentsuku zokuqala zokuya exesheni
Iminqweno yokutya (ngakumbi ukutya okunetyiwa okanye okuswiti)
Amandla aphantsi okanye ukudinwa
Umqolo okanye iintlungu zemisipha
Iimpawu zengqondo kunye neemvakalelo
Ubundlongondlongo okanye ubutshaba
Utshintsho kwiminqweno yesini
Iimpawu ezithile ze-PMS ziyahluka ukusuka kumfazi ukuya kowasetyhini. Kodwa izikhalazo ezintathu eziphezulu kukucaphuka, ukudinwa, kunye nokudumba.
Ugqirha wakho uya kukubuza malunga:
Ipilisi emhlophe tv 308
Iimpawu zakho zePMS
Ixesha lezi mpawu ngokunxulumene sexesheni
Ukuhamba rhoqo kweempawu (inyanga nenyanga, enye nenye inyanga, njl.
Ugqirha wakho uya kubuza malunga nomgangatho wobomi bakho. Imibuzo inokubandakanya:
Ngaba uziva ulusizi, uxhalabile, okanye uxhalabile mva nje?
Uyabona ukutshintsha kwemood? Ukudinwa? Ngaba kunzima ukugxila?
Ngaba unengxaki nomlingane wakho, amalungu osapho okanye osebenza nabo?
Ngaba ukhawuleziswe ngokokude ulale kakubi uze ungatyi?
Ngaba uhlala ubomi bokuhlala ungenamthambo omncinci?
Ngaba uyatshaya imidiza?
Ngaba uyasela utywala okanye iziselo ezinecaffeine?
Ngaba ukutya kwakho kunenyama ebomvu, ukutya okunetyiwa okanye iswekile?
Emva koko, ugqirha wakho uya kuyiphonononga imbali yakho yonyango. Uya kubuza malunga nawaphi na amayeza owasebenzisayo.
Emva koko, ugqirha wakho uya kukuvavanya. Uya kwenza uvavanyo lwe-pelvic nge-Pap smear.
Akukho nto ifunyanwayo inokuqinisekisa ukuxilongwa kwe-PMS. Kodwa uvavanyo olunzulu lomzimba lunokujonga ezinye iingxaki zonyango. Oku kunokubandakanya i-hypothyroidism okanye ithumba lebele, ingqondo okanye isizalo.
Ngokufanayo, akukho vavanyo lwelebhu olunye olunokuqinisekisa ukuba unayo iPMS. Kodwa uvavanyo lwegazi lunokulawula ukungahambi kakuhle kwezonyango. Oku kunokubandakanya i-hypoglycemia, i-hypothyroidism okanye ezinye iingxaki zehomoni ezinokubangela iimpawu zakho.
Ukuba akukho zinto zifunyanisiweyo emzimbeni kwaye iziphumo zovavanyo lwelabhoratri ziqhelekile, ugqirha wakho angakucela ukuba ugcine irekhodi lemihla ngemihla lweempawu zePMS. Uya kuyenza le nto iinyanga ezimbini okanye ezintathu. Le rekhodi iya kubandakanya:
Ixesha lokuya esikhathini
Inkcazo yalo naluphi na uxinzelelo olukhethekileyo oluchaphazele ubomi bakho
Nje ukuba le rekhodi igqityiwe, ugqirha wakho uyakujonga kwakhona ulwazi. Ukuba iimpawu zakho zilandela iphethini ehambelana ne-PMS, oko kuya kunceda ukuseka isifo.
Ngokubanzi, iimpawu zangaphambi kokuya exesheni kufuneka zingabikho kangangeeveki ezimbini ukuze zikulungele ukuxilongwa kwe-PMS. Iimpawu azizukubakho kwakamsinya emva kokuqala kokuya exesheni kude kufike i-ovulation elandelayo.
I-PMS inokuba yimeko yexesha elide. Kwamanye amabhinqa, iimpawu ze-PMS ziyavela ngaphambi kwexesha lokuya exesheni. Le pateni iyaqhubeka kude kuyeke ukuya exesheni. Ukuyeka ukuya exesheni kukuphela okunxulumene nobudala kwimijikelo yokuya exesheni.
Kwamanye amabhinqa, iimpawu ze-PMS zibonakala zincipha emva kweminyaka engama-35.
I-buspirone yinto elawulwayo
Ngenxa yokuba oogqirha abaqinisekanga ncam ukuba yintoni ebangela iPMS, akukho ndlela yakuyithintela. Nangona kunjalo, unokukwazi ukunciphisa ezinye zeempawu ze-PMS ngokukhokelela kwindlela yokuphila esempilweni.
Unyango lwe-PMS luxhomekeke:
Ubukhali kunye nohlobo lweempawu
Umzekelo, iimpawu zakho zinokuba mnene. Isenokungaphazamisi ubomi bakho bemihla ngemihla okanye ubudlelwane bakho. Kule meko, ugqirha wakho unokucebisa ukuba uzame enye okanye ezingaphezulu kwezi nguqu zilandelayo:
Zilolonge rhoqo, jonga ubuncinci imizuzu engama-30 ubuninzi beentsuku zeveki.
Musa ukutsiba izidlo. Landela ishedyuli yokutya rhoqo ukugcina inqanaba leswekile yegazi elizinzile.
Yitya ukutya okunezakha mzimba okuneswekile ecocekileyo.
Zama ukulala kakuhle ebusuku. Kuphephe ukuhlala ubusuku bonke.
Nciphisa icaffeine, utywala, inyama ebomvu kunye nokutya okunetyiwa.
Ziqhelanise neendlela zokunciphisa uxinzelelo. Thatha ibhafu ende entle. Okanye, zama ukucamngca okanye biofeedback.
Ukuba iimpawu zakho zimodareyitha ukuya kubunzima, ugqirha wakho uya kukuyalela amayeza. La mayeza ajolise ekunciphiseni iimpawu ezithile. Umzekelo, izinto zokucwangcisa ngomlomo, ngakumbi ezo ziqulathe zombini i-estrogen kunye neprogestin, zinokubunciphisa ubunzima beekram kunye nobude bexesha lakho.
Ugqirha wakho unokucebisa ukuba uzame iyeza lokuthintela uxinzelelo. Oku kunokwenzeka ukuba uneempawu eziphazamisa umsebenzi wakho okanye uxanduva lwasekhaya okanye ubudlelwane bakho bobuqu. Ezi mpawu zinokubandakanya ukuba nochuku, ukurhoxa ekuhlaleni, ukugqajukelwa ngumsindo okanye uxinzelelo.
Ezona zidambisi zisebenzayo zokunciphisa i-PMS kukukhetha i-serotonin reuptake inhibitors (i-SSRIs) okanye i-serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI). Imizekelo ibandakanya:
IFluoxetine ( Iprozac , iinguqulelo eziqhelekileyo)
Sertraline ( Zoloft , iinguqulelo eziqhelekileyo)
Citalopram ( UCelexa , iinguqulelo eziqhelekileyo)
I-Escitalopram ( ILexapro , iinguqulelo eziqhelekileyo)
Paroxetine ( Paxil , iinguqulelo eziqhelekileyo)
IVenlafaxine ( Umncedisi XR, iinguqulelo eziqhelekileyo)
Ngaphantsi kwesiqhelo, ugqirha wakho unokumisela amayeza abangela ukuba ama-ovari ayeke ukuvelisa i-estrogen, ukuze i-ovulation iyeke. Oku kuhlala kugcinelwe iimpawu ezinzima kakhulu, okanye xa amanye amayeza engaphumeleli. I-Gonadotropin-ekhulula i-hormone (GnRH) i-agonists, efana ne-leuprolide (Lupron), yenza imeko yexeshana yokuyeka ukuya exesheni. Benza oku ngokucinezela iihormoni ezilawula imveliso yehomoni ye-ovari kunye ne-ovulation.
La mayeza aqhelekileyo asetyenziselwa ixesha elifutshane. Ngokuqhelekileyo zikhokelela ekutshiseni okutshisayo kunye nezinye iimpawu zokuyeka ukuya esikhathini. Ukuba unyango kufuneka luqhubeke ngaphezulu kweenyanga ezintandathu, kuya kufuneka uthathe i-estrogen ukukhusela ukulahleka kwethambo.
Nokuba iimpawu zakho zithambile okanye zinzima, kuhlala kunceda ukuba usapho lwakho uluqonde kwaye uluxhase ngelixa unyangwa i-PMS. Ugqirha wakho uya kukukhuthaza ukuba uthethe phandle namalungu osapho malunga neempawu zakho kunye nonyango lwakho lwe-PMS.
Biza ugqirha wakho ukuba iimpawu zakho zokuqala:
Inokubangela uxinzelelo okanye ukungonwabi
Yenza kube nzima kuwe ukusebenza kubomi bemihla ngemihla
Ukuphazamisa ubudlelwane bakho
Ukuba ucinga ukuba usemngciphekweni wokuzenzakalisa wena okanye abanye, tsalela ugqirha wakho idinga lokuya kungxamiseko.
Kwinkoliso yamabhinqa, iimpawu zePMS ziqala ukuthamba emva kweminyaka engama-35. Ziphela xa uyeka ukuya exesheni. Abasetyhini abane-PMS okanye i-PMDD basemngciphekweni omkhulu wokufumana uxinzelelo.
IZiko leSizwe lezeMpilo yeNgqondo
Ikholeji yaseMelika yoQeqesho kunye neGynecologists
IZiko leLizwe leNgcaciso yezeMpilo yaBasetyhini (i-NWHIC)
ukuseta njani umnxeba wenkomfa
cheratussin ac isiraphu esemgangathweni
indlela yokusika ngepeyinti
injani igeneric geni enje
ithatha ntoni i-augmentin